9 မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောစာရင်းအင်း | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မေလ 31, 2016 အင်္ဂါနေ့, မေလ 31, 2016 Douglas Karr
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဂူဂဲလ်မှရှာဖွေပြီးမြင်ဖူးပါသလား မိုဘိုင်း-Friendly အပေါ် tag? Google မှာတောင်မှရှိတယ် မိုဘိုင်း - ဖော်ရွေစမ်းသပ်ခြင်းစာမျက်နှာ သင်၏ site နှင့်ပတ်သက်သောပြissuesနာများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာ။ ၎င်းသည်ဒြပ်စင်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးကောင်းမွန်စွာမြင်နိုင်ရန်သေချာစေသည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်း-ဖော်ရွေ မဖြစ် မိုဘိုင်းပိုကောင်းအောင်သို့သော် ၎င်းသည်အခြေခံကျရုံမျှသာဖြစ်ပြီးသင်၏ site ရှိလက်ကိုင်ဖုန်းသုံးစွဲသူများ၏အမှန်တကယ်သုံးစွဲသူအပြုအမူကိုမကြည့်ပါ။
ခေတ်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းသည်မကြာမီတွင်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။ သင်၏မိုဘိုင်းသုံးစွဲသူများအားကူညီခြင်းသာမက၎င်းတို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခြင်းအတွက်သင့်တွင်အားကောင်းသောမိုဘိုင်းအွန်လိုင်းရှိနေခြင်းရှိရမည်။ Rahul Alim၊ CustomCreatives.com
A တုံ့ပြန်မှုက်ဘ်ဆိုက် မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာကမယုံနိုင်လောက်တဲ့အားသာချက်တွေရှိတယ်။ ပထမ ဦး စွာ desktop နှင့် mobile မှတစ်ဆင့်လည်ပတ်သောသုံးစွဲသူသည်အလားတူအတွေ့အကြုံရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်လှပစွာကိုက်ညီမည်။ တတိယအချက်သည်ဆိုက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွင့်နိုင်သည်။ traffic ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမည့်အစား၊
အဘယ်ကြောင့်မိုဘိုင်း optimization အပေါ်အချိန်ဖြုန်း? သင်၏မိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်လည်ရရှိမှုကိုသက်သေပြနိုင်သောစာရင်းအင်း ၉ ခု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့်အသုံးမပြုပါကရောင်းအားအားလုံး၏ ၃၃% သည်ပျက်ကွက်သည်
လူ ဦး ရေ၏ 40% သည်ပထမရလဒ်သည် mobile optimized မလုပ်လျှင်အခြား site တစ်ခုကိုရှာဖွေလိမ့်မည်
အသက် ၁၈ မှ ၂၀ အတွင်းလူ ၄၅% သည်နေ့စဉ်စမတ်ဖုန်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှာဖွေကြသည်
စားသုံးသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်းတို့၏စျေးဝယ်ခြင်းကိုအချို့သောစမတ်ဖုန်းများမှလစဉ်လတိုင်းကုန်ဆုံးကြသည်
မိုဘိုင်းဖုန်းပိုင်ရှင်များအားလုံး၏ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၀ က်ဘ်ကိုကြည့်ရှုရန်သူတို့၏စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုကြသည်
US ရှိအင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့်ဝက်ဘ်ကိုသာသုံးနိုင်သည်
သုံးစွဲသူ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကောင်းမွန်သောမိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသောကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုကောင်းသောအမြင်ရှိသည်
လူ ဦး ရေ၏ ၅၇% သည်၎င်းတွင်လုံလောက်သောမိုဘိုင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်ထက်နည်းပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
အားလုံးအွန်လိုင်း moible ရှာဖွေမှု၏ 70% စားသုံးသူတစ်နာရီအတွင်းအရေးယူတာကို ဦး ဆောင်လမ်းပြ
Tags: မိုဘိုင်းအတွက်ဒီဇိုင်းမိုဘိုင်းဒီဇိုင်းမိုဘိုင်း optimizationမိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုမိုဘိုင်းကိန်းဂဏန်းများမိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုစာရင်းဇယားမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံမိုဘိုင်း uxတုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်း
ဇွန်လ6ရက် 2016 ခုနှစ် နံနက်9နာရီ 04 မိနစ်
ဤဒေတာအများစုသည် 2013-2014 ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သည် (ထိုကဲ့သို့သော လျင်မြန်သော၊ အမြဲပြောင်းလဲနေသော နည်းပညာအခင်းအကျင်းအတွက် လွန်စွာနောက်ကျနေပုံရသည်)။ နောက်ထပ် လတ်တလော စာရင်းအင်းများ ရှိပါသလား။
Mina Dixie K
2:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 22
ဟေး ဒေါက်ဂလပ်စ်၊ မိုဘိုင်းရောက်ရှိမှုသည် မည်သည့်လုပ်ငန်းအတွက်မဆို မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်ဟု အမှန်ပင်ပြောခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပစ်မှတ်စျေးကွက်ကို တိုးမြှင့်ပေးရုံသာမက ၎င်းတို့ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရုံသာမက ၎င်းတို့ကို ပထမနေရာမှ တွေ့ရှိနိုင်ရန် သုံးစွဲသူအသစ်များကို ရယူရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အောင်မြင်ရန် မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို ဖောက်သည်ဗဟိုပြုရမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မိုဘိုင်းလ်သုံးရလွယ်ကူသော ဝဘ်ဆိုဒ်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နေ့စဉ်ဖြစ်လာရမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။